All ozi nke atọ beta nke gam akporo Q | Gam akporosis
Beta nke atọ nke gam akporo Q bụ onye ọrụ ya: Ozi ya niile
Edere Ferreno | | Gam akporo nsụgharị
Otu n'ime ihe ọhụrụ ndị a tụrụ anya na Google I / O 2019 ọ bụ beta ọhụrụ nke gam akporo Q. Nke a bụ atọ nke betas, nke isii nke sistemụ arụmọrụ ga-enwe. Beta ohuru nke enyere n’ihu eze wee hapụ anyị usoro dị mkpa. Ọrụ ọhụrụ, ụfọdụ n'ime ha adịla a nụchara ya izu ndị a gara aga ma mesịa mechaa.
Beta nke atọ nke gam akporo Q bụkwa nke a ga-arụ ọrụ na ekwentị ndị ọzọ. Ebe ọ bụ na ọ ga-eru ngụkọta nke 21 ngwaọrụ. Ọganihu dị mkpa maka Google n'ọhịa a. Mbido a ga-eme na 24 awa, mana banyere nke a na akụkọ ya anyị ga-agwa gị ihe niile n'okpuru.
1 Ọnọdụ gbara ọchịchịrị
2 Mkpokọta ihuenyo
3 Ọnọdụ Ihuenyo
4 Akpaghị aka ndepụta okwu
5 Azịza akpaaka
6 Mmegharị ọhụụ
7 Mmelite na-enweghị ịmalitegharị
8 Ekwentị ndị ga-emelite
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị
Anyị na-amalite na ihe nwere ike ịbụ ihe kachasị atụ anya maka ọtụtụ. Emechara ya ekwenye, ọchịchịrị mode na-aga ime ya n'ọnụ ụzọ eze na gam akporo Q. Anyị ahụworị otú e si webata ụfọdụ nhazi nke nhazi, mana ugbu a ọ bịara maka ekwentị niile na-emelite ụdị nke sistemụ arụmọrụ. N'ụzọ dị otú a, interface nke ekwentị na-agbanwe oji kpamkpam.
N'okwu a, ekwenyela na ọ ga-arụ ọrụ na akpaghị aka oge anyị na-arụ ọrụ ọnọdụ nchekwa ike na ekwentị. N'ime beta a ị nwere ike ịnwale ya ugbu a.
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na gam akporo: Mmalite na uru
Ekwentị mbu ndị na-apịaji na-akwadebe ịbata n'ahịa n'oge na-adịghị anya. Site na mbido, Google egosilarịrị ntinye aka ya na ụdị ngwaọrụ a, na-arụ ọrụ na Samsung ọbụlagodi ngwa na nke a. Ugbu a, ọ na-achọ inye nkwado site na gam akporo Q eze. Ebe ọ bụ na nkwado na otu kachasị arụmọrụ mode na-ẹkenam maka ụdị meziri.
N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe omume iji ngwa nwere ọkara ihuenyo, na mgbe ihuenyo zuru oke, ngwa ahụ ga-adịkwa. Ma ọ bụ inwe ike iji ọtụtụ ngwa n'otu oge, kewara n'etiti abụọ meziri.
Ọ bụ ọrụ ga-enye ndị ọrụ ohere nke họrọ ogbi ogbi amamọkwa nwa oge. N'okwu a, enwere ike ịchọpụta ngwa ndị anyị chọrọ ịnata ha na ndị anyị na-achọghị. Nwere ike icheta ka ị ghara ichegbu mode na gam akporo, ọ bụ ezie na na nke a ọ na-abịa na ụfọdụ ndozi. Na mgbakwunye, ndị ọrụ nwere ike ịtọ oge ha chọrọ ka Ọnọdụ Nchedo a na-arụ ọrụ n'oge ọ bụla. N'ihi ya, ọ bụ ihe configurable.
Akpaghị aka ndepụta okwu
A mma nke ga-oru na gam akporo Q. Ọ bụ banyere omume mepụta nkọwapụta akpaka maka vidiyo ọ bụla egosiri na ekwentị anyị. Ma obu vidio anyi na ele na web, dika oku vidiyo. Na ụkpụrụ, a na-ebupụta ya dịka ọrụ maka ndị nwere nkwarụ. Ma, ọ na-ọkọnọ dị ka ezi nhọrọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ile a video enweghị ekwentị emitting ụda.
Gmail gosipụtara ndị na-echegharị onwe ha ogologo oge gara aga. Dabere na ọdịnaya nke email, a na-enye ọtụtụ usoro nzaghachi nwere ike izipu. Ihe bara uru nke ukwuu, nke na-ewere ọnọdụ ọhụrụ na beta nke gam akporo Q. Ka ọ na-akpali toma Ọkwa. Yabụ ọ bụrụ na anyị enweta ozi sitere na ngwa, anyị nwere ike iji azịza na-akpaghị aka ziga n'oge ahụ.
A na-emegharị mmegharị ahụ na beta ọhụrụ nke gam akporo Q. Google agbanweela mmegharị ahụ na sistemụ arụmọrụ ogologo oge. N'okwu a, anyị na-ahụ sistemụ dị ka nke ahụ na Pixels, nke mere na ọ nweghị bọtịnụ nloghachi, kama ọ ga-eji ụfọdụ mmegharị mee ya.
Mmelite na-enweghị ịmalitegharị
N'ikpeazụ, anyị hụrụ ohere nke ịwụnye obere mmelite na ekwentị ahụ, na-enweghị imelite ekwentị ma emesịa mgbe anata ya. Ọ bụ ezie na na nke a, ọ bụ ihe na A ga-ewepụta ya na ekwentị nwere gam akporo Q nwa amaala. Yabụ ruo n'afọ ọzọ ọ gaghị abụ ihe nkịtị.
Ekwentị ndị ga-emelite
Dị ka anyị kwurula, enwere ngụkọta nke ekwentị 21 ga-enwe ohere ka mmelite nke atọ beta a. Ọ na-anọchite anya mmụba pụtara ìhè ma e jiri ya tụnyere afọ ndị ọzọ. A na-atụ anya na a ga-arụ ọrụ beta a na 24 na-esote, site na OTA, maka ekwentị ndị a. Ndepụta bụ:
Vivo X27, Vivo Nex S na Nex A
Ezigbo 3 Pro
Y’oburu na inwere udi ihe ndia, igaghi echere otutu oge iji kwalite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Beta nke atọ nke gam akporo Q bụ onye ọrụ ya: Ozi ya niile
Google Pixel 3a na Pixel 3a XL: Ntinye nke Google n'ime etiti